Wasiir hore oo geeriyooday iyo Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay - Awdinle Online
Wasiir hore oo geeriyooday iyo Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay
Waxaa geeriyooday Wasiirkii hore ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Puntland Cabdi Ismaaciil Boss, iyada oo uu ka hadlay Madaxweynaha Puntland.
Qoraal kasoo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa looga tacsiyadeeyay Asxaabtii iyo qaraabadii uu ka baxay Wasiir Hore marna soo noqday Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Puntland.
Hoos ka Akhriso Qoraalka Madaxtooyada Puntland.
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullahi Deni oo ku hadlaaya magaciisa, kan shacabka Puntland iyo kan xukuumadaba waxa uu ka tacaiyaynayaa geerida Alle naxariistii Janno haka waraabiyee Wasiirkii Hore ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Cabdi Ismaaciil Boss.
AHUN Cabdi Ismaaciil Boss ayaa waxbadan kasoo shaqeeyay Dowladdnimada iyo horumarka Puntland, wuxuu soo noqday Wasiirkii Beeraha iyo Guddoomiyaha Bangiga Puntland.
Previous articleMaamulka Gobolka Hiiraan oo ka hadlay Shacabka la dilay
Next articleGuddoomiyaha degmada Yaaqshiid oo qarax lagula eegtay Muqdisho